बंगलादेशको ‘कविता कुम्भ’ मा नेपालको उपस्थिति
माघ, काठमाडौं । बङ्गलादेशको कविता कुम्भ भनेर चिनिने राष्ट्रिय कविता उत्सव हालै सम्पन्न भएको छ । फेब्रुअरी १ र २ तारिखमा ढाकामा सम्पन्न उत्सवमा नेपालबाट पनि सहभागिता भएको छ । सन् १९८७ मा मूलतः दुव्र्यवहार र अत्याचारका विरुद्धमा यो कविता उत्सवको शुरु भएको हो । यस वर्षको उत्सव सन् १९६९ को जनविद्रोहको ५० वर्ष पुगेको
कैंची चलाउने सम्पादक र स्तम्भकारको ठट्टाः रातो झोला खै ? खुइलियो !
७ पुस, पोखरा । ‘तपाईंको रातो झोला खोइ ?’ प्रश्नसँगै कार्यक्रमस्थल रोमाञ्चक बन्यो, हाँसो गुञ्जियो । ‘मेरो पहिचानका ३ बुँदा छन् । निख्खर सेतो कपाल, ढ्याके चस्मा र झोला । त्यो रातो झोला म जस्तै खुइलियो,’ जवाफसँगै फेरि हाँसो थपियो । सम्पादक नारायण वाग्लेले प्रश्न र काँधको बाँयापट्टी रातो झोला झुन्डाइहिँड्ने खगेन्द्र संग्रौलाको जवाफ थियो
म्यानह्याटनको ट्वान्टी थर्ड स्ट्रिटको माथिल्लो तलामा रहेको स्टार बक्समा दिनको १२ बजे भेट्ने उनको टेक्सट पाउनेबित्तिकै म दाह्री र कपाल काट्न सैलुनतिर लागें। १० बजेको थियो। प्रायः दाह्री घरमै काट्थे। तर, आज मनले मानेन। शुक्रबार भएर होला, सैलुनमा निकै भीड थियो। पहिलो पटक भेट्न जान लागेर पनि होला, मनमा थप उत्साह थियो, चिरिच्याँट्ट परेर जान
विश्वकै पहिलो महाकवि
प्रा.डा.शास्त्रदत्त पन्त महर्षि बाल्मीकि विश्वकै योगीका योगी, संगीतज्ञका संगीतज्ञ, कविका कवि हुन्। उनी सबै वेदका धुरन्धर ज्ञाता हुन्। उनले चारै वेदको शिक्षा रामायणमा समेटेका छन्। सम्प्रदाय र जातिका कुराबाट टाढा रहेर वेदको यथार्थ प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार योग र यज्ञ एकै हुन्। यिनले सबै खाले विनाशलाई रोक्न सर्वप्रथम शरीरलाई विकारमुक्त गराएर मात्र सकिन्छ भन्ने
मेरो जिन्दगी यस्तो होस्!
कृष्णजीको नाभीमा फुलेको कमल फूल जस्तै मेरो जिन्दगी प्रफुल्लित होस् सुन्दर र दिव्य होस्। सपना नदेख्ने मानिसहरु कमै होलान् यो संसारमा तर पनि म जन्मिएपछि मैले जिउने जिन्दगी वक्ष-स्थलमा दूध चुसिरहेको शिशुको जस्तै अबोध होस् मैले फेर्ने हरेक श्वासहरुमा त्यो मुस्कान होस् मैले हेर्ने हरेक साझहरुमा त्यो लाली होस्। हरेक चोकमा उभिने शालिक जस्तै मेरो
सुन्दर रमाइलो सुदूरपश्चिममा पर्ने मेरो गाउँ। सुन्दर अपि हिमालको काखमा पर्ने त्यो मेरो ठाउँ ।। सुन्दर पवित्र त्यो खप्तडको काखमा बस्ने त्यो ठाउँ । सुन्दर प्रकृतिसँग ऋषिमुनी भुलाउने मेरो ठाउँ ।। पवित्र महाकाली तटमा नै मेरो गाउँ रमाउँथ्यो । संसारसँग मिलेर सधैं मेरो गाउँ हाँस्ने गर्दथ्यो ।। सबैमा मिलेर मेरो परिवार रमाउने गर्दथ्यो । दुःख,
अन्नपूर्ण आधार शिविरमा गुलियो काठमाडौं
कथाकार गणेश श्रमणद्वारा लिखित लघुकथा संग्रह अन्नपूर्ण आधार शिविरमा लोकार्पण गरिएको छ । अस्ट्रेलियाबाट नेपाल आउँदा अन्नपूर्ण आधार शिविर घुम्ने उद्देश्यका साथ चार सदस्यीय साथीको समूह घान्द्रुकबाट माछापुच्छ्रे बेसक्याम्प हुँदै अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेर पुस्तक लोकार्पण गरिएको टोलीमा सहभागी महालक्ष्मी शर्माले बताइन् । समुन्द्र सतहबाट ४ हजार १ सय ६० मि उचाइमा रहेको उक्त क्षेत्रमा
काठमाडौंको प्रदूषण ‘रेड जोन’ मा
संसारका ९० प्रतिशत केटाकेटी हानिकारक सास फेर्छन्। हरेक वर्ष विश्वभरमा ६ लाख केटाकेटी श्वासप्रश्वास रोगले ज्यान गुमाउँछन्। यो तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो। यसअनुसार १ अर्ब ८० करोड कलिला नानीबाबु विषालु सास फेर्न बाध्य छन्। यसले उनीहरूको मानसिक र शारीरिक विकास प्रभावित छ। सन् २०१६ मा भारतमा पाँच वर्षमुनिका ६०
नेपालमै पहिलोपटक गणित विषयको शब्दकोश सार्वजनिक भएको छ । नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दीलगायत भाषका शब्दको पढ्दै तथा सुन्दै आए पनि गणित विषयमा नेपालमा तयार गरिएको यो शब्दकोश पहिलो भएको साहित्यकार विनयकुमार शर्मा नेपालले बताए । प्राध्यापक महेश्वरप्रसाद उपाध्याय ‘इस्माली’ले सम्पादन गरेको यो शब्दकोश तयार पार्नै १२ वर्ष लागेको नेपालले बताए । सम्पादक उपाध्यायले १० वर्ष र
अरूका लागि होइन प्रिय, म त आफ्नै लागि लेख्छु
‘आँसुका फूलहरू’ कवितासंग्रह, ‘घामका झुल्काहरू’गीत र गजलसंग्रह तथा ‘तारिदेऊ न माझी दाइ’ र ‘उही बाढी उही भेल’ गजलसंग्रह प्रकाशन गरिसकेका साहित्यकार रवि प्राञ्जलसँगको छोटो वार्ता : तपाईं किन लेख्नुहुन्छ ? आत्मसन्तुष्टिका लागि, सामाजिक दायित्व पूरा गर्न वा अरू केही कारण छन् ? सामान्य जस्तो लाग्ने तर जटिल प्रश्न हो यो । यो प्रश्नको सामना मैले धेरैपटक